I-verizon ihamba ngokuthe ngqo kwi-t-mobile & apos; s jugular kunye neyona 'nto iphambili yokuphucula i-5g'
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IVerizon iya ngqo kwi-T-Mobile & apos; s jugular ngesona sivumelwano sikhulu sokuphucula i-5G okwangoku
IVerizon iya ngqo kwi-T-Mobile & apos; s jugular ngesona sivumelwano sikhulu sokuphucula i-5G okwangoku
Ukubona ngendlela I-T-Mobile ibonakala ngathi iyacotha nomzi mveliso we-wireless wase-US kunye ne-apos; s ababhalisile ngelixa sele ikho Ukubhabha ngaphezulu kokhuphiswano ngokubhekiselele kwiziseko zophuhliso ze5G , akufuneki kwaye ungasothusi ukuba iVerizon igcina ukutyhila 'ukunyusa okungahambisiyo' kunye nephulo lentengiso.
Olu hambo lwamva nje ijongeka ngokungafaniyo ne intengiselwano ebanzi iBig Red yaziswa kubathengi bayo abatsha nabasele bekhona iinyanga ezimbalwa emva.
Oko kunokuba kukhuthaze I-T-Mo kunye neapos; s Inkqubo enkulu yokuPhucula iFowuni ye-5G ibhengezwe nje kwiveki kamva, ke kuya kuhlala kubonakala ukuba iMagenta iceba ukulwa nomchasi wayo omkhulu kunye ne-apos; iphulo elikhulu lokuphucula i-5G ngalo lonke ixesha '' nangayo nayiphi na into entsha okanye ephuculweyo.
Yintoni kanye le isivumelwano apha?
Ngamafutshane, iVerizon ifuna ukukhulisa ngokungathandabuzekiyo amanani ayo abhalisileyo e-5G ngokuthatha nantoni na yakudala, erhabaxa, kunye nesixhobo esaphukileyo onokuba ulele malunga nendlu ezandleni zakho.
Elona candelo lilungileyo malunga nale promo yoyikekayo kwintengiso ngokuqinisekileyo yinto yokuba awudingi ukulungisa imeko ye-smartphone ekumgangatho ophakathi njenge-Samsung kunye ne-apos; Galaxy A32 5G. Endaweni yoko, unokufumana isaphulelo esiyi- $ 700 kwi-Apple & apos; ii-iPhones zamva nje okanye kangange- $ 800 kwisaphulelo se-Samsung Galaxy.
Oko kuthetha ukuba i-mini-12 enikwe amandla i-iPhone 12 mini kunye ne & apos; eqhelekileyo 'I-Samsung Galaxy S21 inokuba yeyakho simahla ngoku ngaphandle kokutsiba iihupula ezininzi. Inombolo yokungena ayinyanzelekanga, kodwa ukuba uyayitshintsha indawo oyisebenzisayo, uza kulungela i-Mastercard eyi-300 eyi-Prepaid Mastercard.ngaphezuluEzi zaphulelo zikhankanywe ngasentla.
Ukonga okuthe, ngendlela, kuya kubonelelwa ngohlobo lweekhredithi ezisetyenzisiweyo kwityala lakho kwithuba leenyanga ezingama-24, ezizinto ezisemgangathweni xa kufikwa kwezi ntlobo zeentengiselwano.
Oko ngokucacileyo kuthetha ukuba wena & apos; Kuya kufuneka ukhethe isicwangciso seminyaka emibini sokuhlawula isixhobo, kodwa kwicala eliqaqambileyo, ababhalisile abatsha nabakhoyo abafuna umgca omtsha okanye uhlaziyo olulula bonke banelungelo lokufumana izaphulelo ezipheleleyo.
I & apos; khetha 'isicwangciso esingenamkhawulo sigqityiwe kodwa ngokuqinisekileyo asiyonto incinci Inguqulelo Uluhlu lwezona mfuno ziphambili, kwaye ngelixa ophetheyo engazipheleli ezo zinto kuthi, thina & apos siqinisekile ukuba zibandakanya Ukudlala Okuninzi, Yenza Okungakumbi, kunye nokufumana ezinye iindlela ezingasikelwanga Mda.
Yintoni onokuthengisa ngayo kwaye uza kufumana malini ngefowuni eyonakeleyo?
Ukuba amanye amagama acaciswe apha ngasentla avakala ukuba ayinyani, inokuba kungenxa yokuba ayizizo zonke izixhobo ezamkelweyo yiVerizon 'yoPhuculo oluKhulu kunayo yonke' eya kukufumanela i $ 700 okanye i $ 800 isiya kwindawo entsha eshushu 5G iflegi.
Ngokungafaniyo ne-T-Mobile, iBig Red ayizukuthatha iifowuni ezindala kunye nezisisidenge konke okanye kwizixhobo ezikrelekrele ezivela kwiimpawu ezinjengeHuawei, iSony okanye iNokia. Okwangoku, ukuba ukhetha ukurhweba kwiindawo ezindala ezinje ngeSamsung & apos s Galaxy S6, S7, kunye neNqaku 8 okanye Apple & apos; s iPhone 6 and 7, you & apos; ll have to settle for a $ 350 or $ 400 discount, which is ... not loo nto imbi.
Uyayikhumbula i-Galaxy S8?
Eyona & apos ibhetele kukuba yonke into esuka kwi-Galaxy S8, Qaphela i-9, kunye ne-iPhone 8 kwiGoogle Pixel 3, i-OnePlus 7, kunye ne-LG G8 ThinQ (nangaphezulu, ewe) inelungelo lokufumana amaxabiso aphezulu orhwebo akhankanywe ngasentla .
Yonke loo nto iya kuzo zombini iiyunithi ezisebenza ngokupheleleyo kwimeko yeminti kunye neziphatho eziphathwayo ... ukuba nje akukho & apos akukho monakalo ubonakalayo webhetri (okt ukudumba, ukuvuza, okanye iiapos; kushushu kakhulu ukubamba '). Kulungile, ii-apos zilungile, iVerizon inokukunika i-800 yeedola kwi-Galaxy S8 okanye kwi-iPhone 8 enescreen esikrelekrele okanye olunye uhlobo lomonakalo.
Isaphulelo esikhulu, khawukhumbule, sinokusetyenziswa ekubulaweni kwe5G kunye ne5G Ultra Wideband-ehambelanayo ii-smartphones, ukusukela kwi-Samsung kunye neapos s Galaxy S21, S21 +, kunye ne-S21 Ultra kwiNqaku 20, Qaphela i-20 Ultra, kunye ne-Z Fold 2 , kunye ne-iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, kunye ne-12 Pro Max, ungasathethi ke nge-Motorola Edge +, LG Wing, kunye ne-LG V60 ThinQ.
Ngokusisiseko, ujonge uninzi lwazo Iifowuni eziphambili ze-2021 kunye neapos; Apha, enokuthi ifumaneke simahla okanye ngexabiso eliphantsi ngokumangalisayo ngexesha elilinganiselweyo kuphela.
Ixabiso le-droid turbo 2 lokuthengisa
kwi & t elandelayo kufanelekile
Imodeli yento yephepha selenium java
I-Verizon iqala ukuhlaziya i-Samsung Galaxy S4 kwi-Android 5.0.1 Lollipop
Umthunywa oza kusebenzisa i-Android i-11 iigubhu ukubuyisela inqaku leeNtloko zeNgxoxo
Ezi zixhobo zicoca ibhetri yakho kwaye zithathe konke ukugcina kwakho
I-Google Pixel 2 XL vs LG V30
Apple iPhone XS, XS Max and iPhone XR amaxabiso kunye nemihla yokukhutshwa
Uyichitha njani indawo yakho ye-GPS kwi-Android ngo-2020
Isiphumo sovavanyo lwempilo yebhetri ye-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + iphumile
Uyihambisa njani imidlalo ukusuka kwi-PC yakho ukuya kwifowuni okanye ithebhulethi ye-Android: IDiablo 3, iBala leMfazwe 4, uManyano lweMiqobo
I-smartphone ye-Android 9.0 enesilayidi esikhulu seQWERTY ikhibhodi inokuba yinyani kungekudala
Ukuvulwa kwe-Samsung Galaxy Note 20 Ultra kubetha ixabiso elitsha lamaxesha onke